Middle East Airlines inova Airbus Skywise Health Monitoring mutengi mutsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Middle East Airlines inova Airbus Skywise Health Monitoring mutengi mutsva
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Rebhanoni Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Middle East Airlines inova Airbus Skywise Health Monitoring mutengi mutsva.
Uchishandisa iyo Skywise aviation data platform, SHM inounganidza uye inoisa pakati pekuzivisa, ndege-deck mhedzisiro, mameseji ekugadzirisa nezvimwe, inoisa pamberi pavo, inobatanidza chero kukanganisa nenzira yakakodzera yekugadzirisa dambudziko.
Middle East Airlines ichashandisa mhinduro yezvikepe zvayo zvese.
Iyo Beirut yakavakirwa ndege iri kushandisa ese-Airbus ngarava inosanganisira A320 uye A330 Mhuri ndege.
Airbus 'SHM inochengetedza nguva dzendege uye mutengo wakabatana nekusarongwa kwekugadzirisa.
Middle East Airlines (mea) yakasaina chibvumirano chekubatana nenharaunda yevashandisi veSkywise Health Monitoring (SHM).
Kumira kwenguva refu Airbus mutengi achange ari 50th yendege ichishandisa ichi chitsva chishandiso kukwenenzvera kuchengetedza kwezvikepe zvayo. SHM ichatsigira zvikwata zvekuchengetedza uye zveinjiniya zvendege nekugonesa kutonga-chaiyo-nguva yezviitiko zvendege uye kugadzirisa matambudziko.
Uchishandisa Skywise aviation data platform, SHM inounganidza uye inoisa pakati pekuzivisa, ndege-deck mhedzisiro, mameseji ekugadzirisa nezvimwe, inoisa pamberi, inobatanidza chero kukanganisa nematanho akakodzera ekugadzirisa dambudziko. Inosimbisawo maitiro ekushanda, inopa nhoroondo yekuchengetedza yehurongwa (kubva mubhuku rekunyora uye ruzivo rweMIS rwakaunganidzwa kuburikidza neSkywise Core uye rwakachengetwa mudhamu re data), zvichibvumira kutevedza kunobudirira kwezviziviso. Pamusoro pezvo, inogona kubatsira vendege kutarisira uye kupa maturusi uye zvikamu 'kuti zviwanikwe padyo nendege.
mea ichashandisa mhinduro yezvikepe zvayo zvose. Iyo Beirut yakavakirwa ndege iri kushanda zvese-Airbus ngarava dzinosanganisira A320 uye A330 Mhuri ndege.
Airbus 'SHM inochengetedza nguva dzendege uye mutengo wakabatana nekusarongwa kwekugadzirisa. SHM zvakare Inopindirana neSkywise Predictive Maintenance (SPM) uye Skywise Kuvimbika (SR) kuti ipe yakasanganiswa mushandisi ruzivo. Pamusoro pezvo, yakagadzirira kushandisa masimba ane simba eiyo itsva-on-board Flight Operations uye Maintenance Exchanger (“FOMAX”) data router - iyo inogona kutora uye kurekodha pamusoro pe24,000 chaiyo-nguva paramita yendege kuti iongororwe inotevera.
Smith Oliver anoti:
Zvita 9, 2021 pa07: 10
Uchishandisa data-chaiyo-nguva, mishumo yedhesiki rekubatsira uye metrics inobvumidza iwe kuyera kuti vatengi vanonzwa sei nezve yako helpdesk. Kurekodha kunogadzira marepoti akajairwa kuti akubatsire kuyera nekuvandudza kugona. Freshworks Consultant pa https://www.techloyce.com/freshworks-integrations/ inogona kukubatsira mukugadzirisa mafambiro ako ebasa, mutengi portal, uye mabasa emumiririri kusangana nezvinodiwa zvekambani yako.